अष्ट्रेलियामा वर्ल्ड क्लास डिग्री र करियर दुवै छ : सुनिल सापकोटा,विद्यार्थी - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा वर्ल्ड क्लास डिग्री र करियर दुवै छ : सुनिल सापकोटा,विद्यार्थी
Posted by Himalayan Kangaroo | १८ पुष २०७३, सोमबार ०५:३८ |
मेलबर्न । कास्कीको पोखरा घर भएका सुनिल सापकोटा अहिले मेलबर्न कलेजमा एकाउन्टिङ विषय अध्ययन गर्दैछन् । अध्ययनकै लागि अष्ट्रेलिया आएका उनको अनुभवमा अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरुका लागि विश्वस्तरीय डिग्री र करियरको अवसर दुवैछ । नेपालमा बसेर सोचेको र यहाँ आएर भोगेको अष्ट्रेलियामा निकै अन्तर रहेको बताउँने सापकोटा भन्छन्–अष्ट्रेलियाले जीवनमा संघर्ष गर्न सिकायो । ठूलो कुरा आफ्नो खुट्टामा उभिन सिकायो । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी यो स्टुडेन्ट टल्कमा ।
तपाईको घर कहाँ हो ?
मेरो घर कास्कीको पोखरामा हो ।
अहिले कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ ?
म चाल्र्स डर्विन विश्वविद्यालय अन्तर्गत म मेलबर्नको कलेजमा पढ्दैछु ।
कुन विषय पढ्दै हुनुहुन्छ ?
म एकाउन्टिङ विषय पढ्दैछु ।
आफैंले रोज्नुभएको विषय कि परिवारले ?
म आफैंले रोजेको विषय हो ।
विद्यार्थी जीवन किन रमाइलो ?
विद्यार्थी जीवनमा धेरै साथीहरुसँग बसेर हरेक दिन नयाँ नयाँ कुराहरु सिक्न पाइन्छ । हाँसो,ठट्टा गर्न पाइन्छ । त्यसैलले विद्यार्थी जीवन रमाइलो लाग्छ ।
कतिखेर विद्यार्थी जीवन नरमाइलो लाग्छ ?
जब साथीहरु टाढा हुन्छन् । कहिलेकाहीं आफूले सोचेको जस्तो नहुँदा पनि नरमाइलो लाग्छ । अनि साथीहरुसँग छुट्टिने बेला अझ सबैभन्दा बढी नरमाइलो लाग्छ ।
विद्यार्थी जीवनमा लभ गर्नु ठीक हो ?
लभ भन्ने कुरा एक अर्कालाई बुझेर गर्नुपर्छ । तर धेरैजसो कलेजमा पढ्दा गरेको लभ कलेजसँगै सकिएको देख्छु । त्यसे लभ चाहिं नगरेको राम्रो ।
लभ लेटर मीठो कि कलेजको लेक्चर ?
हाहाहा । त्यो त भन्नै पर्दैन । किनकि पढ्नलाई त लभ लेटर नै मीठो नि ।
कक्षामा कतिखेर निन्द्र लाग्छ ?
जब टिचरले एकोहोरो लेक्चर दिन्छ । त्यतिखेर कुनै दोहोरो संवाद वा कुराकानी भएन भने निन्द्र लाग्छ ।
कक्षामै निदाउँदा देखेको कुनै सपना ?
त्यसरी सपना नै देख्ने गरि चाहिं कक्षामा निदाउन पाएको छैन । तर झुलेर बस्दा पछाडिबाट टिचरले हानेर झसँग पारेको अनुभव चाहिं धेरै छन् ।
अष्ट्रेलियामा आएर के सिक्नुभयो ?
अष्ट्रेलिया आएर आफ्नै जीवनलाई बुझें । मेरो क्षमता के हो ? मैले के गर्नसक्छु भन्ने जानें । दुख नगरि केही प्राप्ति हुन्न भन्ने बुझें । पहिला खर्च चाहियो भने आमासँग माग्थें । कहिलेकाहीं नदिनुहुँदा रिसाएर फन्केर हिड्थें । तर यहाँ आएर आफैंले दुख गरेर पैसा कमाउन परेपछि बल्ल थाहा भयो पैसा कमाउँन कति गाह्रो रहेछ भनेर ।
अष्ट्रेलियाको सकरात्मक पक्ष के पाउनुभयो ?
सबैभन्दा सकरात्मक पक्ष भनेको मान्छेलाई समयको महत्व बुझाउँछ अष्ट्रेलियाको जीवनशैलीले । अर्को कुरा मान्छेलाई व्यवहारिक र परिश्रम गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सिकाउँछ ।
नकरात्मक पक्ष नि ?
अष्ट्रेलिया आउने वित्तिकै धेरै नेपालीहरु आफ्नो संस्कार र संस्कृति भुलेर यहाँको पाश्चात्य संस्कृतिमा भुलेको देखें भने अधिकांश नेपालीहरु केवल पैसाकैपछाडि दौडिरहेको पाउँछु । त्यसले उनीहरुलाई एकोहोरो बनाएको देख्छु । यो चाहिं अलि ठीक लाग्दैन मलाई ।
नेपालमा बसेर कल्पना गरेको अष्ट्रेलिया र यहाँ आएपछि के फरक पाउँनुभयो ?
हाहाहा । नेपालमा बसेर सोचेको र अहिले यहाँ आएर देखेको अष्ट्रेलियामा आकाश जमिनको फरक पाइन्छ । नेपालमा बस्दा सजिलो सोच्छौं । कलेज जाने र काम गर्ने । तर यहाँ आएर त्यही काम गर्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने भोगेपछि मात्र थाहा हुन्छ । जिन्दगी संघर्ष हो भन्थे मान्छेहरु,यहाँ आएपछि हो रहेछ भन्ने थाहा भयो । केही काम गर्नुअघि यहाँ १० पटक सोच्नुपर्छ ।
Previousअष्ट्रेलियाको सिड्नीमा घाइते भएका सत्कारका वुवा सम्पर्कमा आए
Nextजेलभित्रै झडप हुँदा ५६ जनाको मृत्यु
सिड्नी स्थित हार्वर ब्रिजमा आदिवासी झण्डा, अष्ट्रेलियाको झण्डा राख्न छोड्नुपर्ने सांसद फोलेको तर्क
२५ माघ २०७४, बिहीबार ०३:०४
अष्ट्रेलियामा सामानको मूल्य बढाएर छुटको अफर राख्ने अनलाइन पसलमाथि मुद्दा
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १०:०६
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा समुद्री किनारमा गएका किशोर रगताम्य भएर फर्किए
२५ श्रावण २०७४, बुधबार ०४:५५